JIX Izixhobo Zokwakha - Imagazini yoyilo
Izixhobo Zokwakha I-JIX yitikiti lokwakha elenziwe ngumculi obonakalayo osekwe eNew York kunye nomyili wemveliso uPatrick Martinez. Yenziwe ngezinto ezincinci zemodyuli ezenzelwe ngqo ukuvumela iindiza zokusela ezisemgangathweni zidibaniswe kunye, ukwenzela ukudala iintlobo ezahlukeneyo zokwakha. Iziqhagamshelo zeJIX zingena kwiigridi ezibuhlanti eziphuma ngokulula phakathi, zinqamleze, kwaye zitshixe indawo. NgeJIX ungakha yonke into ukusuka kulwakhiwo lwamagumbi amakhulu ukuze ube nemifanekiso eqingqiweyo yeetafile eziphezulu, wonke usebenzisa izihlanganisi zeJIX kunye neendiza zokusela.
Igama leprojekthi : JIX, Igama labayili : Patrick Martinez, Igama lomthengi : Blank Bubble.
Amathoyizi, imidlalo kunye noyilo lweemveliso zokuzonwabisa
Izixhobo Zokwakha Patrick Martinez JIX